उदयपुर समाचार – MeroJilla.com
उदयपुरका सिडियोको सक्रियतामा प्रशासनमै महिला डेक्स Friday, September 7th, 2018
उदयपुर । बढ्दो बलत्कारका घटना तथा महिला माथि हुन सवै किसिमका घटना न्यूनिकरणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय उदयपुरले महिला हिंसा न्यूनिकरण युनिट स्थापना गरेको छ ।निजामती कर्मचारी दिवशको अवसर पारेर प्रशासन कार्यालय उदयपुरले यस युनिट स्थापना गरेको हाे । महिला हिंसाका घटनाका पिडितलाई सरल र सहज किसिमले सेवा प्रवाह होस भन्ने उद्देश्यले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको हाता भित्र..
“एक सरकारी कर्मचारीको साहित्यिक सृजना राप बजारमा” Thursday, August 30th, 2018
“मैले बुझेको जीवन र उसले भोगेको जीवन नितान्त फरक छ । उ जीवनभित्र जीवन बोकेर बाँचेको छ, जीवनभित्रको गहुँङ्गोपन उ महशुस नगर्न सक्छ । उ त्यसलाई सुमसुम्याउँछ, ढाढस दिन्छ तर ......... म जीवनभित्र उसको आत्म बोकेर बाँचीरहेछु र उसलाई खोजीरहेछु । उसको न्यानो स्पर्श र चिसोपनाको आभाष.....। बस कल्पनामा हराउँन मन पराउँने एउटा बबुरो....! स्नेहत्वको खडेरीमा कतै नहेरी हाम फाल्ने मेरो मन ! म जस्तै छ छैन..
उदयपुर अदालतमा मुलुकी एेनको बारेमा छलफल Friday, August 17th, 2018
उदयपुर । जारी भएको १६५ वर्षपछि मुलुकी ऐनले काँचुली फेरेको छ । देवानी तथा फौज्दारी मुद्दासँग सम्बन्धित कानुन र कार्यविधिसमेत अब यसमा समावेश गरिँदैछ । मुलुकी एेन लागु हुने दिन जिल्ला अदालत उदयपुर र सरकारी वकिल कार्यालय उदयपुरले एक अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरि मुलुकी एेनको बारेमा छलफल गरेको छ । जिल्ला अदालत परिसरमा अायोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा परिवर्तित मुलुकी ऐन..
उदयपुरमा सरकारी जग्गा यसरी बाँडे सँसद, मेयर र वडाअध्यक्षले Saturday, July 21st, 2018
उदयपुर ५ साउन । उदयपुरमा सरकारी नाममा रहेको सरकारी जग्गानै जनप्रतिनिधिले भागबण्डा गरेको रहस्य खुलेको छ । त्रियुगा नगरपालिका १३ मा रहेको त्रियुगा हवाई मैदानको नाममा लालपुर्जा रहेको ५ख कित्ता नम्वर १०३ मा १४ विगाहा १६ कठ्ठा १६ धुर जग्गा बाँडेको रहस्य खुलेको हो । जुन जग्गामा अहिले तरकारी बजार, थारुहट रंगशाला निर्माण भइसकेको छ भने मदन भण्डारी अतिथि सदनको निर्माणधिन छ ।..
सिडियोकाे प्रयासपछि कटारीबाटै पासपोर्ट Monday, January 8th, 2018
उदयपुर २४ पुस । उदयपुरको पश्चिमी क्षेत्रका स्थानीयहरुको पासपोर्टको बनाउन जिल्ला धाउनु पर्ने बाध्यता हटेको छ । कटारी क्षेत्रका स्थानीयहरुले सोमबार देखी ईलाका प्रशासन कार्यालय कटारीबाटै राहदानी दिने व्यवस्था गरेपछि स्थानीयहरुलाई सहज भएको हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदिपराज कणेलका अनुसार कटारी नगरपालिका, ताप्ली गाउँपालिका र उदयपुरगढी गाउँपालिका स्थानीयहरुले..
अस्पतालमा गम्भीर बिरामी छाडेर चिकित्सक बेपत्ता Thursday, December 28th, 2017
उदयपुर ,१३ पुस । । दुर्घटनामा परेका गम्भीर बिरामी अस्पतालमा छाडेर बेपत्ता भएका जिल्ला अस्पताल उदयपुरका चिकित्सकमाथि कारबाही सुरु भएको छ । चिकित्सक नभएपछि गम्भीर घाइतेलाई बिराटनगर लगिएको थियो । जिल्लाको रौतामाई गाउँपालिकामा मंगलबार बलेरो दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको थियो भने तीन नजा घाइते भएका थिए। घाइतेहरुलाई उद्धार गरी प्रहरीले जिल्ला अस्पतालमा पुर्याएको..
थप निर्वाचनको मुखमा गृह तानिए सिडीयो Tuesday, December 5th, 2017
उदयपुर,मंसिर १९ । निर्वाचनका बेला जिल्लामा शन्ति सुरक्षा कायम गर्न नसकेको भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी चन्द्रमान श्रेष्ठलाई गृह मन्त्रालय तानिएको छ । कान्तिपुरमा समाचार छ । प्रशासन कार्यालय स्रोतका अनुसार प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको महत्वपूर्ण समयमा जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको अवस्था सुदृढ गर्न नसकेको चन्दै मन्त्रालय तानिएको हो । श्रेष्ठको ठाउँमा गृह..
मास्क लगाएका युवाले यसरी बिच्छ्याए एम्बुस, त्यसमा परे कांग्रेस उम्मेद्वार Thursday, November 30th, 2017
उदयपुर १४ मङ्सिर । । चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्न जाँदै गर्दा एम्बुसमा परेर उदयपुर, प्रतिनिधि सभा २ का कांग्रेस उम्मेदवार नारायण कार्कीको हातखुट्टा, आँखा र टाउकोमा चोट लागेको छ। उदय श्री बहुमुखी क्याम्पस कटारीकी नेविसंघ सभापति मीरा कटवालको बायाँ खुट्टा क्षतविक्षत भएको छ। उनीसहित गम्भीर घाइते तीन जनाको शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा उपचार भइरहेको छ। अन्य चारजना सामान्य..
“भ्रष्टाचारी, जाली, फटाहाको सञ्जालमा रहन सकिन, त्यसैले आजकै मितिदेखि पार्टी छोडेँ” : काग्रेस सचिव रामकुमार राई
सन्तोष कार्की/कटारी । नेपाली काँग्रेसका जिल्ला सचिब रामकुमार राईले आज एक औपचारिक समारोहमा काँग्रेस पार्टी परित्याग गरेका छन्।निर्वाचनलाई लक्षित गरी वामगठबन्धनले जिल्लाको पश्चिमी क्षेत्र कटारी बजारमा आयोजना गरेको चुनावीसभामा सम्बोधन गर्दै काँग्रेस पार्टी छोडी वामगठबन्धनलाई सहयोग गर्ने घोषणा गरेका हुन् । झण्डै तीन दशक लामो समय काँग्रेसमा व्यतित गरेका राईले सभालाई..
अपडेटः उदयपुरमा जीप पल्टिँदा ज्यान गुमाउनेको संख्या ८ पुग्यो Monday, October 30th, 2017
उदयपुर ,१३ कार्तिक। उदयपुरको कटारीबाट ओखलढुंगाको लागि छुटेको टाटासुमो दुर्घटना हुदाँ ८ जनाको ज्यान गएको छ । सोमवार कटारीबाट ओखलढुंगाको लागि छुटेको ना.१.ज. ३४०४ नम्बरको टाटासुमो उदयपुरको कटारी नगरपालिकाको वडा नं. ८ ठाँटीमा दुर्घटना भएको हो । दुर्घटनामा ८ जनाको ज्यान गएको छ भने ३ जना घाइते भएका छन् । घाइतेमध्ये २ को अवस्था गम्भीर रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय कटारीका डिएसपी..
गाईघाटमा सुविधा सम्पन्न आँखा अस्पताल बन्ने Wednesday, January 25th, 2017
उदयपुर माघ १२ । आँखा अस्पतालको भवन बनाउन जिल्लास्थित राजनीतिक दलहरु एकमत भएका छन । त्रियुगा नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको १ बिघा जग्गामा आँखा अस्पताल बनाउन राजनैतिक दलले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन । नेपाल नेत्र ज्योति संघ उदयपुरको सोमबार आयोजना भएको पुर्वाञ्चल क्षेत्रीय कार्याशाला गोष्ठीमा जिल्लाका राजनीतिक दलहरुले भाषणबाटै भवन बनाउन सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए..